डबल डिजिट हार्छ स्विप गुप्त सम्पत्ति बजार - Blockchain समाचार
फेब्रुअरी 2, 2018 व्यवस्थापक
डबल डिजिट हार्छ स्विप गुप्त सम्पत्ति बजार
को cryptocurrency बजार आज रातो को एक समुद्र हो, सबै शीर्ष 10 बजार टोपी द्वारा cryptocurrencies अन्तिम लागि डबल अंकको प्रतिशत घाटा रिपोर्ट 24 घण्टा.
Bitcoin गिरा छ 16 % तल 10-हप्ता lows गर्न नै अवधिमा $8,000 र यसको खराब साप्ताहिक हानि ग्रस्त सक्छ (धेरै 25 %) अप्रिल देखि 2013. को cryptocurrency जनवरी मा एक 30-प्रतिशत ड्रप भोगे र तल छ 45 % वर्ष-को मिति आधार मा.
Ethereum गरेको ईथर टोकन तल छ 28 %. को cryptocurrency यो हप्ता पहिले अपेक्षाकृत लचीला देख्यो थियो, संस्थागत राजधानी प्रवाह गर्न रिपोर्टअनुसार कारण र ethereum मंच मा पेट्रो cryptocurrency presale भेनेजुएला निर्णय. तथापि, को साँढेको पकड कमजोर छ देखिन्छ र Eth अन्तिम वरिपरि व्यापार देखेको थियो $785.
यसैबीच, लहर गरेको XRP टोकन एक साथ हारे सूचीमा तेस्रो रैंकों 35 प्रतिशत गिरावट. को cryptocurrency अहिले खसेको छ $0.635 - देखि दिसम्बर यसको सबै भन्दा कम स्तर. 15. कि वर्ष XRP खराब सुरुवात निम्नानुसार, एक 49 जनवरी समयमा प्रतिशत गिरावट.
कुल मिलाएर, सँगै लिएको सबै cryptocurrencies को कुल बजार पूँजीकरण भन्दा बढी गिरा छ $100 अरब.
थप चार्ट तल, दुःखलाई र डुम बीच एक दुर्लभ सकारात्मक टिप्पणी स्ट्राइकिङ्, DigixDAO नामको सुन-ब्याक टोकन (DGD) पोस्ट होने पछि बाहिर खडा 30 प्रतिशत लाभ.
बितेको वर्षमा, आईसी ...
Blockchain समाचार 30.05.2018
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain वेधशाला र फोरम Blockchain टेक को "Forefront" गर्न ईयू ल्याउन
अर्को पोस्ट:क्यानाडा पहिलो Blockchain ETF नियामकहरु द्वारा अनुमोदित